यौन/स्वास्थ्य – Page3– Karnalikhabar
अण्डाको पहिलों भाग खानु हुन्छ कि हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस
काठमाडौं – अण्डालाई शरीरमा पौष्टिक तत्व प्रदान गर्ने खानाकोरुपमा लिइन्छ । सन्तुलित भोजनमा पनि अण्डा खान सल्लाह दिइन्छ । प्रोटिन प्राप्त गर्नका लागि अण्डा जस्तो राम्रो खानेकुरा केही पनि हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । शरीरमा तागत
किन मोटाउछन् बिवाह पछि महिला ? यस्तो छ गोप्य रहस्य
बिवाह पछि महिला किन मोटाउछन् भन्ने कुरा सबैको कहुतुहूलताको बिसय बन्न सक्छ । बिवाह पछि पुरुषको भन्दा महिलाको तौल अत्याधिक बढ्ने गरेको पाइएको छ । किन मोटाउछन् महिला भन्ने बिसयमा केहि अध्ययन यरिएको छ । १ निद्रा पूरा नहुनुः
ग्यास्ट्रिक भगाउने यो सरल उपाय …….
नेपालीको राष्ट्रिय रोग ग्यास्ट्रिक जो कोही सताएर हैरान हुनुहुन्छ भने अब अपनाउनुहोस् यो सरल तरीका –मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजो आज।अल्छी स्वभाव विकसीत हुनु
बाँझोपनबाट जोगिन चाहानुहुन्छ ? बेलैमा जान्नुहोस्
प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन ३२, २०७४
एजेन्सी । आजभोलिका हजारौँ महिलाले आफू ‘अझै पूर्ण आमा नभएको’ भन्दै सन्तान जन्माउन ढिलाइ गरिरहेकै छन् । तर जब महिलाको उमेर ढल्किँदै जान्छ, सन्तानको सम्भावना पनि घट्दै जान्छ। यो शाश्वत सत्य हो।बेलैमा सन्तान नजन्माएका र
पाठेघरका मुखको क्यान्सर, कसरी, किन र कसलाई हुन्छ ?
पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर)बारे नेपालमा धेरै महिलालाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले, रोग लागेको तेश्रो वा चौथो स्टेजमा मात्र महिलाहरु पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धि समस्या लिएर चिकित्सकका पुग्ने गर्छन् । जसका
रक्सी र मासु धेरै खाए कलेजोमा के जम्छ, जानी राखौ …..?
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन ३१, २०७४
काठमाडौं: जीवनशैलीका कारण आजकल कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या अधिकांश नेपालीमा देखिन थालेको छ । वीर अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर विधाननिधि पौडेलका अनुसार कलेजोमा केही मात्रामा बोसो हुनु स्वभाविक भए
यदि तपाईको खाना खाँदा धेरै पानी पिउने बानी छ भने तुरुन्तै बदल्नुहोस् किनकी त्यसले तपाईको स्वास्थ्यमा फाइदा गरिरहेको हुदैन । पानी पिउनु कति फाइदाजनक छ भनेर त हामी सबैलाई थाहा नै छ । तर, कतिबेला पिउने वा नपिउने भन्ने जानकारी
यसकारण खाने गर्नुहोस् गाँजर
काँच्चै खाएपनि, पकाएर खाएपनि, अचार बनाएर खाएपनि गाँजर नेपालीमाझ लोकप्रिय छ । यो जति लोकप्रिय छ, स्वास्थ्यका लागि उति नै लाभदायी पनि छ । गाँजर ५ हजार वर्षअघि फेला परेको विश्वास गरिएको छ । एउटा अचम्मको तथ्य के छ भने पहिले गाँजर
पौष्टिक दृष्टिकोणले माछा–मासु पोषिलो खाना हो । तर, आवश्यकभन्दा बढी खाएमा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि कस्तो प्रकारको मासु कति खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ । झन्
के हो फल्स प्रिगनेन्सी? यस्ता छन गर्भवती भएको भ्रम र समाधानका उपायहरु :: पुरा पढ्नुहोस्
फल्स प्रिगनेन्सी एउटा अवस्था हो जहाँ केही महिला आफू गर्भवती भएको भ्रममा बाँच्छन् । अझै पनि कतिपय महिला यस्ता समस्याबाट पीडित हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरुमा गर्भवती भएको महिलामा जस्तै परिवर्तन आउँछ । वास्तवमा उनी गर्भवती भने